Paul's Letter to the Galatians – 2माछा
घर / बाइबल / Epistles / Paul's Letter to the Galatians
1:1 पावलले, एक प्रेरित, छैन मानिसहरूबाट र मानिस मार्फत, तर येशू ख्रीष्टमार्फत, र परमेश्वर पिताको, जसले उहाँलाई मृत्युबाट बिउँताउनुभयो,
1:2 र सबै भाइहरूलाई गर्ने मेरो साथ हो: गलातीयामा को चर्च गर्न.
1:3 ग्रेस र परमेश्वर पिताको तपाईंले शान्ति, र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको देखि,
1:4 जो हाम्रो पापको तर्फबाट आफूलाई दिनुभयो, उहाँले यस वर्तमान दुष्ट उमेर हामीलाई छुटकारा सक्छ भनेर, परमेश्वर हाम्रो पिताको इच्छा अनुसार.
1:5 उहाँलाई सदासर्वदा महिमा छ. Amen.
1:6 म तिमीलाई चाँडै भएको हस्तान्तरण गरेको आश्चर्य, उहाँबाट जो ख्रीष्टको अनुग्रह मा तपाईं भनिन्छ, अर्को सुसमाचार गर्न भन्दा.
1:7 त्यहाँ कुनै अन्य छ, त्यहाँ जसले तपाईंलाई बाधा केही व्यक्ति हुन् भनेर बाहेक जो ख्रीष्टको सुसमाचार उल्टिनु गर्न चाहनुहुन्छ.
1:8 तर यदि जो कोहीले, पनि हामी वा स्वर्गबाट ​​एउटा दूत, तपाईं एउटा सुसमाचार हामी तपाईंलाई प्रचार गर्ने एक भन्दा अन्य प्रचार थिए, उहाँलाई अभिशाप होस्.
1:9 जसरी हामी अघि भने छन्, त्यसैले अब म फेरि भन्न: कुनै तिमीलाई एउटा सुसमाचार प्रचार गरेको छ भने, तपाईंले प्राप्त छन्, जो त्यो भन्दा अन्य, उहाँलाई अभिशाप होस्.
1:10 हूँ म अब मानिसहरू persuading, वा परमेश्वरको? वा, मैले मानिसहरूलाई खुशी पार्न खोजिरहेको छु? म अझै पनि मानिसहरू खुसी थिए भने, त्यसपछि म ख्रीष्टको दास हुन छैन.
1:11 म बुझ्न हुनेछ लागि, भाइहरूले, मलाई प्रचार गरिएको छ, जो सुसमाचारको मानिस अनुसार छैन.
1:12 र म मानिस देखि यो प्राप्त गर्नुभयो, न त म यो सिके, येशू ख्रीष्टको प्रकाश मार्फत बाहेक.
1:13 तपाईं यहूदी भित्र मेरो पूर्व व्यवहार को सुनेका लागि: कि, उपाय परे, म परमेश्वरको चर्च खेदो र विरुद्ध उनको लडे.
1:14 र म मेरो आफ्नै प्रकारको बीचमा मेरो बराबरी को धेरै परे यहूदी मा उन्नत, मेरा पुर्खाहरू को परम्परा तिर थप प्रशस्त सिद्ध भएको जोस मा.
1:15 तर, जब उसलाई खुसी जो, मेरो आमाको गर्भबाट, अलग मलाई सेट थियो, र जो आफ्नो अनुग्रह मलाई भनिएको छ,
1:16 मलाई भित्र आफ्नो पुत्रलाई प्रकट गर्न, म अन्यजातिहरूको बीचमा उहाँलाई evangelize सक्छ भनेर, म अर्को शरीर र रगतको सहमति खोज्न थिएन.
1:17 न त म यरूशलेम जानु भयो, जो मेरो अघि प्रेरितहरू थिए ती. बरु, म अरब गए, र अर्को म दमीशक फर्के.
1:18 अनि तेस्पछि, तीन वर्षपछि, म पत्रुस हेर्न यरूशलेम गए; र म पन्ध्र दिनको लागि उसलाई बसे.
1:19 तर म अन्य प्रेरितहरूको कुनै पनि देखे, जेम्स बाहेक, प्रभुको भाइ.
1:20 अब के म तपाईंलाई लेख्दै छु: हेर, परमेश्वरको सामु, म झूट होइन.
1:21 अर्को, म सिरिया र सिलिसिया हुँदै अघि बढ्यो को क्षेत्रहरु गए.
1:22 तर म यहूदियामा को चर्च गर्न अनुहार अज्ञात थियो, जो ख्रीष्टमा थिए.
1:23 तिनीहरूले मात्र सुनेका: "उहाँले, जो पूर्व हामीलाई खेदो, अब उहाँले एक पटक लडे जो विश्वास evangelizes। "
1:24 र तिनीहरूले मलाई परमेश्वरको महिमा.
2:1 अर्को, चौध वर्ष पछि, म यरूशलेम फेरि जानुभयो, मलाई बर्णाबास र तीतस संग लिएर.
2:2 र म प्रकाश अनुसार गए, र म अन्यजातिहरूको बीचमा प्रचार छु भनेर सुसमाचारको बारेमा तिनीहरूलाई बहस, तर ती टाढा गर्ने कुरा मानिरहेको थिए, नत्र सायद म चलाउन सक्छ, वा चलाउनुभयो, खेर.
2:3 तर पनि तीतस, जो मेरो साथ थियो, उहाँले एक अन्यजाति थिए हुनत, खतना गर्न compelled थिएन,
2:4 तर केवल झूटो भाइहरूको किनभने, जो अनजानमै मा ल्याए थिए. तिनीहरू हाम्रो स्वतन्त्रता जासुसी गर्न गोप्य प्रविष्ट, जो हामी ख्रीष्ट येशूमा छ, त्यसैले तिनीहरू हामीलाई servitude गर्न कम हुन सक्छ.
2:5 हामी अधीनमा तिनीहरूलाई उपज थिएन, पनि एक घण्टा, सुसमाचारको सत्य तपाईंसँग रहन भनेर क्रममा,
2:6 र ती टाढा गर्ने कुरा मानिरहेको थिए. (जो तिनीहरूले एक पटक हुन सक्छन्, यो मलाई केही मतलब. परमेश्वर मानिसको प्रतिष्ठा स्वीकार गर्दैन।) र जो केहि हुन दावी थिए ती मलाई प्रस्ताव केही थियो.
2:7 तर यो विपरीत थियो, तिनीहरूले देखेका थिए देखि कि खतना सुसमाचार मलाई सुम्पियो, जसरी खतना सुसमाचार पत्रुस सुम्पिएको थियो.
2:8 उहाँले लागि जो पत्रुस खतना गर्ने गर्न Apostleship काम थियो, पनि अन्यजातिहरूको बीचमा मलाई काम थियो.
2:9 अनि त, तिनीहरूले मलाई दिइएको थियो अनुग्रह स्वीकार गरेका थिए जब, जेम्स र Cephas र यूहन्ना, जो खम्बाहरू जस्तै देखिन्थ्यो, मलाई र बर्णाबासलाई गर्न संगति को दाहिने हात दिए, हामी अन्यजातिहरूको गर्न जाने भनेर, तिनीहरूले खतना गए गर्दा,
2:10 हामी गरिब को mindful हुनुपर्छ भनेर मात्र सोधेको, जो म पनि के गर्न पांडित्याभिमानी थियो कि धेरै कुरा थियो.
2:11 तर Cephas एन्टिओक आइपुगेको थियो जब, म आफ्नो अनुहार उहाँको विरुद्धमा उभिए, किनभने उहाँले blameworthy थियो.
2:12 पहिले केही व्यक्तिहरूलाई जेम्स आइपुगेका लागि, उहाँले अन्यजातिहरूको संग खाए. तर जब तिनीहरूले आइपुगेका थिए, उहाँले अलग थुतेर आफूलाई अलग, यस खतनाको थिए ती भय राख्ने.
2:13 र अन्य यहूदीहरूले आफ्नो नाटक गर्न consented, भनेर पनि बर्णाबास भन्ने falseness मा उनलाई नेतृत्व थियो.
2:14 तर म तिनीहरूले सही हिड्ने थिएनन् कि देखेका थिए जब, सुसमाचारको सत्य द्वारा, म सबैको सामने Cephas भन्नुभयो: "यदि तिमी, तपाईं यहूदी हुँदा, अन्यजातिहरूको र यहूदीहरूलाई जस्तै बाँचिरहेका छौं, यो कस्तो छ तपाईंलाई यहूदीहरूको भन्सार राख्न अन्यजातिहरूको compel कि?"
2:15 प्रकृति द्वारा, हामी यहूदीहरू छन्, र अन्यजातिहरूको को छैन, पापी.
2:16 र हामी मानिस व्यवस्था कामहरू द्वारा जायज छैन भनेर थाहा, तर केवल येशू ख्रीष्टको विश्वास द्वारा. र त हामी ख्रीष्ट येशूमा विश्वास, क्रममा हामी ख्रीष्टको विश्वास द्वारा जायज हुन सक्छ कि, र व्यवस्था को काम द्वारा. कुनै शरीर लागि व्यवस्था को काम द्वारा जायज हुनेछ.
2:17 तर यदि, ख्रीष्टमा जायज गर्न खोजिरहेका बेला, हामी आफै पनि पापी हुन फेला, त्यसपछि ख्रीष्ट पापको मन्त्री हुनेछ? यो त हुन गरौं!
2:18 यदि म नाश गर्नुभएको कुरा पुनर्निर्माण लागि, म एक prevaricator रूपमा आफैलाई स्थापना.
2:19 व्यवस्था मार्फत लागि, म व्यवस्था गर्न मरेको भएका छन्, म परमेश्वरको लागि बाँच्न सक्छ भनेर. म ख्रीष्टसित क्रूसमा गर्न nailed गरिएको छ.
2:20 मा बस्छु; अझै अहिले, यसलाई म छैन, तर साँच्चै ख्रीष्टको, मलाई बसोबास. र हुनत म शरीरमा अब बाँच्न, म परमेश्वरको पुत्रको विश्वासमा बाँच्न, मलाई प्रेम गर्नुभयो र जो आफूलाई मेरो लागि वितरण.
2:21 म परमेश्वरको अनुग्रहको अस्वीकार छैन. न्याय व्यवस्था मार्फत छ भने लागि, त्यसपछि ख्रीष्ट व्यर्थमा मृत्यु.
3:1 हे बेहोस गलाती, जो त्यसैले तपाईं सत्य पालन छैन भनेर तपाईं मोहित छ, तापनि येशू ख्रीष्ट आफ्नो आँखा अगाडि प्रस्तुत गरिएको छ, तपाईं बीच क्रूसमा?
3:2 म मात्र यो थाहा गर्न चाहनुहुन्छ: तपाईं व्यवस्था को काम गरेर आत्मा पाए, वा विश्वासको सुनुवाइ द्वारा?
3:3 तपाईं त मूर्ख छन्, तपाईं आत्माले थाले हुनत, तपाईं अब शरीरका अन्त्य हुनेछ?
3:4 तपाईं एउटा कारण बिना यति पीडित गरिएको छ? यदि यति, त्यसपछि यो व्यर्थमा छ.
3:5 त्यसैले, तपाईं आत्मा वितरण गर्ने उसले गर्छ, र जसले तपाईंलाई बीचमा चमत्कार काम गर्दछ, व्यवस्था को काम द्वारा कार्य, वा विश्वासको सुनुवाइ द्वारा?
3:6 यो लेखिएको थियो जस्तै छ: "अब्राहामले परमेश्वरको विश्वास, र यो न्याय निम्ति उहाँलाई प्रतिष्ठित थियो। "
3:7 त्यसैले, थाहा विश्वासको भएकाहरूलाई कि, यी अब्राहामको छोरा छन्.
3:8 त्यसैले धर्मशास्त्र, परमेश्वरले विश्वास गरेर अन्यजातिहरूको सफाइ भनेर foreseeing, अब्राहामलाई भविष्यवाणी गरिएको: "सबै जातिका तपाईंलाई आशिष् गरिनेछ।"
3:9 अनि त, विश्वासको भएकाहरूलाई विश्वासी अब्राहामलाई आशिष् गरिनेछ.
3:10 जस्तै धेरै व्यवस्था कामहरू को हुन् लागि एक श्राप अन्तर्गत छन्. लागि यो लिखित गरिएको छ: "श्राप व्यवस्थाको पुस्तकमा लेखिएका छन् भनेर सबै कुरामा जारी गर्दैन जो सबैलाई छ, जस्तो तिनीहरूलाई गर्न। "
3:11 र, व्यवस्था मा देखि कुनै एक परमेश्वरले जायज छ, यो प्रकट भएको छ: "यो बस मानिस लागि विश्वास गरेर जीवित।"
3:12 तर व्यवस्था विश्वासको छैन; सट्टा, "उहाँले यी कुराहरू तिनीहरूलाई जीवन बिताउने हुनेछ गर्छ जसले।"
3:13 ख्रीष्टको व्यवस्था को श्राप बाट हामीलाई मुक्त गरेको छ, उहाँले हाम्रो लागि श्राप बन्नुभयो देखि. लागि यो लेखिएको छ: "श्रापित रूख देखि झुन्डियो गर्ने कसैलाई छ।"
3:14 यो अब्राहामको आशिष् ख्रीष्ट येशूको माध्यम अन्यजातिहरूको पुग्न सक्छ भनेर थियो, हामी विश्वास माध्यम आत्मा को प्रतिज्ञा प्राप्त हुन सक्छ भनेर क्रममा.
3:15 भाइहरूलाई (म मानिस अनुसार बोल्न), यदि मानिसको नियमको पुष्टि गरिएको छ, कुनै एक अस्वीकार वा थप्न थियो.
3:16 प्रतिज्ञा अब्राहामलाई र आफ्नो सन्तानलाई गरियो. उहाँले भन्न भएन, "र descendents गर्न,"धेरै गर्न भने, तर सट्टा, रूपमा भने एक, उहाँले भन्नुभयो, "आफ्नो सन्तानलाई,"जो ख्रीष्ट हुनुहुन्छ.
3:17 तर म यो भन्न: परमेश्वरले पुष्टि भएको नियमका, जो, पछि चार सय र तीस वर्ष व्यवस्थाको भयो, nullify छैन, प्रतिज्ञालाई खाली गर्न ताकि.
3:18 को उत्तराधिकार व्यवस्था छ भने लागि, त्यसपछि यो प्रतिज्ञा अब छ. तर परमेश्वरले प्रतिज्ञा मार्फत अब्राहामलाई यो bestowed.
3:19 किन, त्यसपछि, त्यहाँ एक व्यवस्था थियो? यो किनभने अपराध को स्थापित भएको थियो, सम्म सन्तान पुग्नु थियो, जसलाई उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभयो, मध्यस्थकर्ताको हातमा मार्फत स्वर्गदूतहरूले नियुक्त.
3:20 अब एक मध्यस्थ एक को छैन, अझै परमेश्वर एउटै छ.
3:21 त्यसैले त, परमेश्वरको प्रतिज्ञा गर्न कानून विपरीत थियो? यो त हुन गरौं! यदि व्यवस्था दिइएको थियो लागि, जो जीवन दिन सक्षम थियो, साँच्चै न्याय व्यवस्थाको हुनेछ.
3:22 तर धर्मशास्त्र पाप अन्तर्गत सबै संलग्न छ, त्यसैले प्रतिज्ञा कि, येशू ख्रीष्टको विश्वास द्वारा, जसले विश्वास गर्नेहरूलाई दिनुभएको हुन सक्छ.
3:23 तर विश्वास अघि आइपुगे, हामी कानुन अन्तर्गत संलग्न भएर संरक्षित थिए, प्रकट भएको थियो जो कि विश्वास निम्ति.
3:24 र यति व्यवस्था ख्रीष्टमा हाम्रो संरक्षकको थियो, क्रममा हामी विश्वास द्वारा जायज हुन सक्छ.
3:25 तर अब विश्वास आइपुगेको छ, हामी एक संरक्षकको अन्तर्गत अब हो.
3:26 तपाईं लागि परमेश्वरको सबै छोराहरू छन्, ख्रीष्ट येशूको छ जो विश्वास मार्फत.
3:27 ख्रीष्टमा तिमीहरू धेरै बप्तिस्मा छ रूपमा लागि गरिएको ख्रीष्टसित ढाकिएको छन्.
3:28 त्यहाँ यहूदी न ग्रीक न हो; त्यहाँ दास न त मुक्त न हो; त्यहाँ पुरुष न महिला न हो. तपाईं ख्रीष्ट येशूको सबै एक छन्.
3:29 र तपाईं ख्रीष्टको हो भने, त्यसपछि तपाईं अब्राहामको सन्तानको छन्, प्रतिज्ञालाई अनुसार शासकका.
4:1 तर म भन्न, समयमा हकदार एक बच्चा छ, उहाँले एक सेवक कुनै फरक छ, उहाँले सबै मालिक छ तापनि.
4:2 उहाँले Tutors र caretakers अन्तर्गत छ लागि, पिता द्वारा predetermined थियो जो समय सम्म.
4:3 त्यसैले पनि हामी, जब हामी बच्चाहरु थिए, संसारको प्रभाव गर्न subservient थिए.
4:4 तर जब समय को पूर्णतामा आइपुगेको, परमेश्वरले आफ्नो पुत्र पठाउनुभयो, एक महिला बाट गठन, व्यवस्था अन्तर्गत गठन,
4:5 उहाँले कानुन अन्तर्गत थिए ती उद्धार सक्छ भनेर, हामी छोराहरू ग्रहण प्राप्त हुन सक्छ क्रममा.
4:6 त्यसैले, किनभने तपाईं छोराहरू छन्, परमेश्वरले आफ्नो हृदय मा आफ्नो छोराको आत्मा पठाएको छ, रो बाहिर: "अब्बा, बुबा। "
4:7 र यति अब उहाँले एक सेवक छ, तर एक छोरा. तर उहाँले एक छोरा छ भने, त्यसपछि उहाँले पनि हकदार छ, परमेश्वरको माध्यम.
4:8 तर त्यसपछि, पक्कै पनि, परमेश्वरको नजान्ने गर्दा, तपाईंले ती सेवा गर्ने, प्रकृति द्वारा, छैन देवताहरूको छन्.
4:9 तर अब, तपाईं परमेश्वरको ज्ञात छ देखि, वा बरु, देखि तपाईं परमेश्वरले ज्ञात गरिएको छ: तपाईं कसरी फेरि दूर गर्न सक्नुहुन्छ, कमजोर र गरिब प्रभाव गर्न, जो तपाईं फेरि नयाँ सेवा गर्न चाहन्छन्?
4:10 तपाईं दिन सेवा, र महिना, र पटक, र वर्ष.
4:11 म तपाईं को लागि भयभीत छु, सायद नत्र म बीच व्यर्थमा labored हुन सक्छ.
4:12 भाइहरूलाई, म तपाईंसँग प्रार्थना गर्छु. म हुँ रूपमा हुन. म, पनि, तपाईं जस्तै हुँ. तपाईं मलाई सबै घाइते छैन.
4:13 तर के तपाईंलाई थाहा छ कि, शरीरका कमजोरी मा, म लामो समय को लागि तपाईं सुसमाचार प्रचार, र आफ्नो परीक्षा मेरो शरीरमा छन् भनेर.
4:14 तपाईं नाइँनास्ति वा मलाई अस्वीकार गरे. तर सट्टा, तपाईं परमेश्वरको दूत जस्तै मलाई स्वीकार, पनि ख्रीष्ट येशूको जस्तै.
4:15 त्यसैले, आफ्नो खुशी कहाँ छ? म गवाही गर्न प्रस्ताव लागि भनेर, यदि यो गरिन सक्छ, तपाईं आफ्नो आँखा बाहिर plucked थियो र मलाई दिनुभएको थियो.
4:16 त्यसैले त, म सत्य बताएर आफ्नो शत्रु भएका छन्?
4:17 तिनीहरूले तपाईं अनुकरण छैन. र तिनीहरूले तपाईंलाई बहिष्कार गर्न इच्छुक छन्, ताकि तपाईं तिनीहरूलाई अनुकरण गर्न सक्छौं कि.
4:18 तर राम्रो छ के को देखासिकी गर्नेहरू हुन, सधैं राम्रो तरिकामा, र मात्र म संग वर्तमान छु छैन.
4:19 मेरो सानो छोरा, म फेरि जन्म दिने छु, सम्म ख्रीष्टको तपाईंलाई गठन गरिएको छ.
4:20 र म स्वेच्छाले तपाईंसँग वर्तमान हुनेछ, अहिले पनि. तर म मेरो आवाज बदल हुनेछ: म तपाईं को लज्जित छु.
4:21 मलाई भन, जो चाहन्छन् तपाईं व्यवस्था अन्तर्गत हुने, तपाईं व्यवस्था पढेको छैन?
4:22 यो लेखिएको छ लागि अब्राहाम दुई छोरा थिए कि: सेवक महिला द्वारा एक, र नि: शुल्क महिला द्वारा एक.
4:23 र दास को थियो जसले शरीरका अनुसार जन्म भएको थियो. तर मुक्त स्त्रीको थियो त्यो प्रतिज्ञा द्वारा जन्म भएको थियो.
4:24 यी कुराहरू एउटा रूपक मार्फत भन्नुभयो छन्. यी लागि दुई testaments प्रतिनिधित्व. पक्कै पनि एक, सीनै पर्वतमा मा, servitude निम्ति जन्म दिन्छ, जो हागार हो.
4:25 सिनाई लागि अरब मा एक पहाड छ, जो वर्तमान समयको यरूशलेम सम्बन्धित छ, र यो उनको छोरा सेवा गरिरहेका.
4:26 तर माथि छ नि: शुल्क छ यरूशलेममा कि; एउटै हाम्रो आमा हो.
4:27 यसलाई लेखिएको थियो: "आनन्द गर, हे बाँझो एक, हुनत तपाईं गर्भ धारण छैन. निस्कने फुट्छ र कराउन, तपाईं जन्म दिन गर्छन् हुनत छैन. लागि धेरै सुनसान सन्तानहरू छन्, पनि एक पति छ जसले उनको भन्दा बढी। "
4:28 अब हामी, भाइहरूले, इसहाक जस्तै, प्रतिज्ञालाई छोराहरू छन्.
4:29 तर जस्तै त्यसपछि, जो आत्मा अनुसार जन्म भएको थियो शरीरका अनुसार जन्म भएको थियो जसले उहाँलाई सताए, त्यसैले पनि अब यो छ.
4:30 र धर्मशास्त्रको भन्न के गर्छ? "बाहिर महिला सेवक र उनको छोरा कास्ट. सेवक छोरा लागि महिला निःशुल्क स्त्रीको छोरा संग हकदार हुन हुँदैन। "
4:31 अनि त, भाइहरूले, हामी दास महिला छोराहरू छैनन्, बरु निःशुल्क स्त्रीको. र यो ख्रीष्ट हामीलाई स्वतन्त्र छ, जो संग स्वतन्त्रता छ.
5:1 अडान दृढ, र इच्छुक छैन फेरि servitude को जुवा द्वारा आयोजित गर्न.
5:2 हेर, म, पावलले, तपाईं भन्न, यदि तपाईं खतना गरिएको छ कि, ख्रीष्टको तपाईं कुनै लाभ हुनेछ.
5:3 म फेरि पुष्टि, बारेमा हरेक मानिस आफूलाई circumcising, उहाँले सम्पूर्ण व्यवस्था अनुसार कार्य गर्न बाध्य छ.
5:4 तपाईं ख्रीष्टको खाली भइरहेका छन्, कानून द्वारा जायज भइरहेका छन् जसले तपाईंलाई. तपाईं अनुग्रह बाट खसेको छ.
5:5 मा आत्माको लागि, विश्वास द्वारा, हामी न्याय आशा पाउनेछन्.
5:6 ख्रीष्ट येशूमा लागि, न खतना न त uncircumcision केहि माथि प्रबल, तर केवल विश्वास जो दान मार्फत काम गर्दछ.
5:7 तपाईं राम्रो चलान गरेको छ. त्यसैले के तपाईं impeded छ, तपाईं सत्य पालन छैन भनेर?
5:8 प्रभाव यस प्रकारको तपाईं जो कल छ उहाँबाट छैन.
5:9 एक सानो खमिर सम्पूर्ण आम corrupts.
5:10 म तपाईंलाई भरोसा, प्रभु मा, कि तपाईं प्रकारको केही स्वीकार गर्नेछ. तर, उहाँले तपाईं न्याय सहन पर्छ जो disturbs, उहाँले हुन सक्छ जसलाई.
5:11 र मेरो लागि रूपमा, भाइहरूले, यदि म अझै पनि खतना प्रचार, किन म अझै पनि सतावट भोगिरहेका छु? त्यसपछि लागि क्रस को घोटाले खाली गरे हुनेछ.
5:12 र म जसले तपाईंलाई बाधा ती टाढा भताभुङ्ग हुनेछ भनेर इच्छा.
5:13 तिम्रो लागि, भाइहरूले, स्वतन्त्रता बोलाइएको छ. तपाईं मात्र शरीरका लागि एक अवसर मा स्वतन्त्रता बनाउन हुँदैन, तर सट्टा, आत्माको दान मार्फत एक अर्को सेवा.
5:14 सम्पूर्ण व्यवस्था लागि एक शब्द द्वारा पूरा हुन्छ: "तपाईं आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नेछु।"
5:15 तर तपाईं क्षति र एक अर्को निल्न यदि, एक अर्को तपाईंलाई खपत छैन भनेर सावधान!
5:16 त्यसैले त, म भन्छु: आत्मा हिंड्न, र तपाईं शरीरका इच्छाहरू पूरा छैन.
5:17 शरीरका लागि आत्मा विरुद्ध कामनाहरु, र शरीर विरुद्ध आत्मा. र यी देखि एक अर्को विरुद्ध हो, तपाईं जो तपाईं चाहनुहुन्छ सक्छ.
5:18 तर यदि तपाईं आत्मा नेतृत्व गर्दै, तपाईं व्यवस्था अन्तर्गत छैनन्.
5:19 अब शरीरका कामहरू प्रकट गर्दै; उनीहरु: व्यभिचार, कामवासना, समलिङ्गीहरूले, आत्म-भोग,
5:20 मूर्तिहरू को सेवा, लागूऔषध प्रयोग, वैमनस्यता, contentiousness, डाह, क्रोध, quarrels, dissensions, डिभिजनका,
5:21 ईर्ष्या, हत्या, खुमार, carousing, र यस्तै कुराहरूको. यी कुराहरू बारे, म तपाईंलाई प्रचार गर्न जारी, म तिमीलाई प्रचार रूपमा: यो बाटो मा कार्य गर्नेहरूलाई परमेश्वरको राज्यको प्राप्त हुँदैन.
5:22 तर आत्मा को फल दान छ, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, forbearance,
5:23 नम्रता, विश्वास, नम्रता, abstinence, नैतिक शुद्धता. त्यहाँ यस्ता कुराहरू विरुद्ध कुनै व्यवस्था छ.
5:24 ख्रीष्टको आफ्नो शरीर क्रूसमा हुन् छन् ती लागि, यसको भरिएको र चाहना साथ.
5:25 यदि हामी आत्मा द्वारा बाँच्न, हामी पनि आत्मा द्वारा हिँड्नुपर्छ.
5:26 हामीलाई खाली महिमा इच्छुक बन्न गरौं, एक अर्को प्रोभोकिंग, एक अर्को envying.
6:1 र, भाइहरूले, यदि मानिस कुनै पनि ठेस द्वारा overtaken गरिएको छ, आध्यात्मिक छन् जसले तपाईंलाई मार्दव एक आत्मा यो जस्तै कसैले निर्देशन गर्नुपर्छ, आफूलाई पनि परीक्षा हुन सक्छ तपाईं विचार.
6:2 एक अर्को गरेको बोझबाट बोक्न, र त तपाईं ख्रीष्टको व्यवस्था पूरा गर्नेछु.
6:3 जो कोहीले ठान्नुहुन्छ भने आफूलाई केही हुन, उहाँले केही हुन सक्छ हुनत, उहाँले धोका.
6:4 त्यसैले प्रत्येकले आफ्नै कामको प्रमाणित गरौं. र यसरी, उहाँले महिमा हुनेछ मात्र, र अर्को मा.
6:5 प्रत्येक एक लागि आफ्नै बोझ बोक्न पर्छ.
6:6 र शब्द सिकाउनुभयो भइरहेको छ जसले उसलाई उसलाई यो छलफल गरौं जो उहाँलाई यो सिकाउन छ, हरेक राम्रो तरिकामा.
6:7 हराउनु लक्षविना हिड्नु गर्न छनौट छैन. भगवान हाँसो छैन गर्न सकिन्छ.
6:8 एक मानिस जो लागि छरिएको हुनेछ, पनि उहाँले कटनी गर्नेछ भन्ने. आफ्नो शरीरमा sows जसले लागि, शरीरका देखि उहाँले पनि भ्रष्टाचार कटनी गर्नेछ. तर जसले आत्मामा sows, आत्मा देखि उहाँले अनन्त जीवन कटनी गर्नेछ.
6:9 अनि त, हामिलाई राम्रो गरिरहेको मा कमी हुन. समयमा लागि, हामी बिना कटनी गर्नेछ असफल.
6:10 त्यसैले, हामी समय गर्दा, हामी सबैलाई तिर राम्रो काम गर्नुपर्छ, र ती तिर सबै को सबै भन्दा विश्वास को घरेलू को को हो.
6:11 म मेरो आफ्नै हातले तपाईंलाई लिखित छन् अक्षरहरू कस्तो विचार.
6:12 तपाईं को रूप मा धेरै को लागि उनि शरीरमा खुसी पार्न चाहन्छन् रूपमा, तिनीहरूले खतना गर्न compel, तर तिनीहरूले ख्रीष्टको पार को सतावट सक्छ मात्र यसैले.
6:13 र अझै, न आफूलाई के तिनीहरूले, जो खतना छन्, व्यवस्था राख्न. बरु, तिनीहरूले तपाईंलाई खतना गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसैले तिनीहरू आफ्नो शरीरमा महिमा सक्छन्.
6:14 तर हालसम्म महिमा मलाई देखि यो हुन, हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रूसमा बाहेक, जसलाई विश्व मलाई क्रूसमा छ, र संसारलाई म.
6:15 ख्रीष्ट येशूमा लागि, न खतना न त uncircumcision कुनै तरिकामा प्रबल, तर यसको सट्टा त्यहाँ एउटा नयाँ सृष्टि हो.
6:16 र जसले यो नियम पालना: शान्ति र कृपा तिनीहरूमाथि हुन सक्छ, र परमेश्वरको इस्राएल मा.
6:17 अन्य विषयमा विषयमा, कुनै एक समस्या गरौं मलाई. म मेरो शरीर मा प्रभु येशूको stigmata पूरा.
6:18 हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह आफ्नो आत्मा संग हुन सक्छ, भाइहरूले. Amen.